यर्मिया6ERV-NE - शत्रुले - Bible Gateway
यर्मिया 5यर्मिया 7
यर्मिया6Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
शत्रुले यरूशलेम घेर्दछ
6 “हे बिन्यामिनी हो, आफ्नो सुरक्षाको लागि भाग।
यरूशलेमको शहरदेखि भाग।
तको शहरमा युद्धको तुरही फुक
बेथक्के-रेमको शहरमा चेताउनीको झण्डा उठाऊ।
ती कुराहरू गर किनभने उत्तरदिशाबाट महासर्वनाश आईरहेछ।
डरलाग्दो सर्वनाश तिमीहरू कहाँ आईरहेछ।
2 सियोनकी छोरी!
तिमी हरियो मैदान जस्तै सुन्दरी छौ।
3 गोठालाहरू यरूशलेमा भेंडा़का बथानहरू लिएर आउँदछन्,
तिनीहरूले आफ्नो पालहरू यसको वरिपरि बनाउँछन्
प्रत्येक गोठालोले आफ्ना भेंडा़ बथानको हेरचाह गर्छन्।
4 “यरूशलेमको विरूद्ध युद्ध गर्न तैयार हौ।
उठ! मध्य-दिनमा हामी शहर आक्रमण गर्नेछौं।
तर अति ढिलो भइसकेको छ।
साँझको छाँयाहरू फैलिरहेका छन्।
5 यसकारण उठ! हामी राती शहर आक्रमण गर्नेछौ।
आऊ, यरूशलेमको पक्का महलहरू नष्ट पारौं।”
6 यही रीतले सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ
“रूखहरू काट र त्यही रूखहरूले यरूशलेमको वरिपरि
छेक्ने घेराहरू बनाऊ।
अत्याचार बाहेक त्यस शहरमा केही छैन।
यसलाई सजाय भोगाउनै पर्छ।
7 एउटा कुवाले आफ्नो पानी ताजा राख्छ।
त्यस्तै प्रकारले, यरूशलेमले आफ्नो दुष्टता ताजा राख्छ।
सधैँ शहरमा दङ्गा र ध्वंशको विषयमा सुन्छु।
म सधैँ यरूशलेममा विराम चोटहरू देख्छु।
8 चेताउनी तर्फ ध्यान देऊ, यरूशलेम।
यदि तिमीहरूले सुनेनौ भने म तिमीहरूपट्टि पिठ्यूँ फर्काउँनेछु।
म तिम्रो भूमि रित्तो मरुभूमि जस्तै पारिदिने छु।
कोही पनि त्यहाँ बस्न योग्य हुनेछैन।”
9 यही प्रकारले सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ:
“खेतमा दाख बटुले झैं इस्राएलमा बाँकी रहेका मानिसहरू भेला गर।
दाखहरू टिप्नेले झैं दाखको बोटहरू फेरि नियाल।”
10 म कोसित बोल्नु?
मैले कसलाई चेताउनी दिनु?
कसले मेरो कुरा सुन्छ?
इस्राएलका मानिसहरूले आफ्ना कानहरू थुनेका छन्।
यसकारण तिनीहरूले मेरो चेताउनी सुन्दैनन्।
परमप्रभुको वचन तिनीहरूका निम्ति शरमपूर्ण हुन्छ।
तिनीहरू उहाँका कुरा सुन्नु चाहँदैनन्।
11 यसकारण म परमप्रभुको क्रोधले भरिएको छु।
म त्यसलाई लिएर थाकिसकेको छु।
“परमप्रभुको क्रोध गल्लीहरूमा खेलिरहेका नानीहरूमाथि पोखाऊ।
जवानहरूमाथि परमेश्वरको क्रोध खन्याऊ।
लोग्ने-स्वास्नी एकै साथ सबै पक्राऊ पर्नेछन्।
सबै बूढा-पाकाहरू पक्राऊ पर्नेछन्।
12 तिनीहरूका घरहरू अन्य मानिसहरूलाई दिइनेछ।
तिनीहरूका खेतहरू र पत्नीहरू अन्य मानिसहरूलाई दिइनेछ।
म यस भूमिका मानिसहरूमाथि मेरो हात उठाउनेछु।”
13 “इस्राएलका सबै मानिसहरू लोभी छन्।
माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्मका इस्राएली मानिसहरू,
घुसको लागि मरिमेटछन्।
अनि अगमवक्ता देखिलिएर पूजाहारीहरूसम्म झूटो बोल्छन्।
14 अगमवक्ताहरू र पूजाहारीहरूले तिनीहरूका घाउहरूमा मलमपट्टी गर्नु पर्छ।
तर तिनीहरूले ती घाऊहरूलाई कोट्‌याको जस्तो मात्र ठाने।
तिनीहरू भन्छन्, ‘प्रत्येक कुरो ठीक छ,
अनि प्रत्येक जग्गामा शान्ति छ’, जब कि त्यहाँ शान्ति छैन।
15 पूजाहारीहरू र अगमवक्ताहरू आफूले गरेका,
नराम्रा कुराहरूले लज्जित हुनु पर्ने।
तर तिनीहरू एकदमै लज्जित छैनन्।
तिनीहरू कसरी लज्जित हुनुपर्ने जान्दैनन्।
यसकारण तिनीहरू अरूसितै दण्डित हुनु पर्छ।
जब म मानिसहरूलाई सजाय दिन्छु,
तिनीहरू भूईँमा फ्याँकिनु पर्छ।”
16 परमेश्वरले यी कुराहरू भन्नुभयो,
“दोबाटोमा उभ अनि हेर।
सोध पूरानो बाटो कहाँ छ।
सोध कहाँ असल बाटो छ, अनि त्यो बाटोमा हिँड।
यदि तिमीले त्यसो गर्यौ भने तिमी स्वयंले विश्राम पाउनेछौ।
तर तिमीहरूले भन्यौ,
‘हामी असल बाटोमा हिँड्ने छैनौं।’
17 तिमीहरूमाथि निगाह राख्न मैले एकजना चौकीदार रोजेको छु।
मैले तिनीहरूलाई बताएँ, ‘युद्धको तुरहीको आवाज सुन।’
तर तिनीहरूले भने, ‘हामी सुन्ने छैनौ।’
18 यसर्थ, सारा जाति-जातिहरू, सुन!
तिनीहरूको साक्षी-प्रमाण विषयमा ध्यान देऊ।
19 हे पृथ्वीका मानिसहरू हो! यसमा ध्यान देऊ!
यहूदाका मानिसहरूको लागि म नष्ट ल्याइरहेको छु,
किनभने तिनीहरूले नराम्रो कर्मका निम्ति योजना बनाएका छन्,
अनि तिनीहरूले मेरो सन्देशहरूलाई ध्यान दिएनन्,
अनि मेरा शिक्षाहरू अस्वीकार गरे।”
20 परमप्रभु भन्नुहुन्छ, “किन मेरो लागि शबाको देशबाट सुगन्धित धूपहरू ल्यायौ?
किन तिमीहरूले मेरो निम्ति सुदुर देशबाट सुगन्धित बेंत ल्यायौ?
तिमीहरूले गरेका बलिहरूले मलाई खुशी बनाउँदैन।
तिम्रो बलिदानहरूले मलाई सन्तुष्ट पार्दैन्।”
21 यसकारण, त परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ,
“म यहूदाका मानिसहरूलाई समस्याहरू दिनेछु।
तिनीहरू ढुङ्गाहरू जस्तो हुनेछन् जसले मानिसहरूलाई पतन गराउनेछ।
बाबु छोराहरू तिनीहरूमाथि ठोकिने छन्,
मित्रहरू र छिमेकीहरू मर्नेछन्।”
22 परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ,
“हेर, सेना उत्तरबाट आईरहेछ।
घेरै टाढा-टाढा ठाउँहरूबाट एउटा महान जाति पृथ्वीमा आइरहेछ।
23 सेनाहरूले तिनीहरूसित धनु-काँड र भालाहरू ल्याउँछन्।
तिनीहरू निष्ठूर छन्।
तिनीहरूमा दया छैन।
तिनीहरूका आवाज घोडाहरूको आवाज जस्तै छ।
हे सियोनकी छोरी! यी सेनाहरू युद्धका निम्ति तत्पर छन्,
र तिमीमाथि आक्रमण गर्नु आइरहेकाछन्।”
24 हामीले ती सेनाहरूको बारेमा सुनेका छौं।
हाम्रा हातहरू भयले दुर्बल भएका छन्।
प्रसुती वेदनामा परेकी स्त्रीलाई जस्तै
हामीलाई दु:ख र पीडाले घेरेको छ।
25 खेतमा तिर नजाऊ।
अनि सडकतिर नआऊ,
किनभने शत्रुहरूसित तरवारहरू छन्
अनि जहीं-तहीं विपद छ।
26 मेरा मानिसहरू हो!
दु:ख प्रकट गर्ने पोषाक लगाऊ,
अनि खरानीमाथि लडी-बडी गर।
यस्तो प्रकारले विलाप गर कि,
मानौं तिम्रो भएको एउटै मात्र बालक मरेको छ,
किनभने विनाश अतिशीघ्र हामीमाथि आउनेछ।
27 “यर्मिया, मैले तिमीलाई
मेरा मानिसहरू माझ कसी लाउने मानिस बनाएँ।
तिमीले तिनीहरूलाई परीक्षा गर्नेछौ,
र तिनीहरूको जीवन विषयमा चाल पाउनेछौ।
28 तिनीहरू सबै विद्रोही हुन्
र चारैतिर असन्तुष्टी मच्चाइरहेका छन्।
तिनीहरू सबै काँसा र फलाम जस्तै छन्
तिनीहरू विनाशकहरू हुन्।
29 खँलातिले आगो तेज पार्छ र अशुद्धी हटाउँछ,
तर मेरा मानिसहरूलाई केही गर्नु सकिंदैन,
कारण तिनीहरूबाट खराबी हटाउनु सकिंदैन।
30 तिनीहरूलाई ‘खोटो चाँदी’ भनिनेछ।
तिनीहरूलाई त्यो नाउँ दिइने छ,
किनभने परमेश्वरले तिनीहरूलाई अस्वीकार गर्नु भयो।”